Nyora Bhizinesi Rako neBing Bhizinesi Portal | Martech Zone
kubva Google muridzi wezvakawanda zvekutsvaga musika, isu tinowanzo tarisa pazviri zvishoma. Zvisinei, Bing yanga ichitora zvishoma nezvishoma mugove wemusika uye yabuda nemamwe maapplication akasarudzika - kusanganisira Android nePadad. Zvimwe zvezvinhu zveaya maapplication uye iyo Bing saiti pachayo zvave zvakanaka kwazvo zvekuti takaona Google Borrow uye kuwedzera yavo yekutsvaga injini nenzira yakafanana.
Mepu yeBing yakanaka chose uye mukurumbira wayo uri kukura. Bing yakatanga Bing Bhizinesi Portal kuti mabhizinesi anyore bhizinesi ravo uye rakasimba kwazvo.
Ini ndanyora nezve kukosha kwekutsvaga kwenzvimbo uye kunyoresa nebasa rebhizinesi reGoogle. Chipo cheBing chakakura zvakare, uye chine mamwe mawedzera ekuwedzera - senge mafoni ekuona uye QR Makodhi. Maresitorendi nemabhawa anogona kunyange batanidza kana kusanganisira mamenyu avo.
Sezvo kunyoresa neBing Bhizinesi Portal kuri kwemahara, hazvisi-brainer kune mabhizinesi ekuti vatore zvinyorwa zvavo uye kusimudzira yavo bhizinesi online. Kunyoresa kwaive nyore uye ini ndakagamuchira kadhi mune tsamba nePIN Code mukati memavhiki mashoma. Ini ndobva ndakwanisa kupinda, kuwedzera logo yedu yebhizinesi redu, uye kuzadza ruzivo rwese rwunodiwa rweku portal kuburitsa bhizinesi redu. Iva nemoyo murefu - zvinyorwa zvako hazvingakurumidze kubuda mukutsvaga.
Tags: AOLapuidon wettrickGlobal Society yeDhijitari Kushambadzira Vanogadziramutambobatsiro